Na izany na tsy izany, inona no tantara ambadik’ilay samurai mampitsangatsangana ny sakany? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Aogositra 2018 4:56 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, 繁體中文, русский, Español, Français, 日本語, Português, Nederlands, عربي, polski, English
‘'Mpiady mampitsangatsangana saka manao akanjo fiadiana'(着甲武人猫散歩逍遥図) avy amin'i Noguchi Tetsuya, 2014. Sary naparitaka manerana ny haino aman-jery sosialy.
Misy sary nozaraina tao amin'ny tambajotra sosialy im-polo tany ho any nandritra ireo taona maro lasa, indrindra tsy nisy fanolorana. Sary mampiseho samourai tsy mikiraro mampitsangatsangana saka manao akanjo fiady. Manana aroloha misy sofin-tsaka ilay samourai, ary toa lanin'ny andro sy antitra be ilay sary, angamba efa tamin'ny taonjato salantsalany Japoney.
Misy karazana fanazavana momba izay voaseho:
Ny sary hosodoko avy amin'ilay Mongoliana mpanafika, Genghis Khan, tiako indrindra pic.twitter.com/r2aY26LKTL
Ny tena marina, vokatr'ilay mpahaikanto Japoney, Tetsuya Noguchi ilay sary hosodoko, izay ny fahaizany manokana dia ny fanehoana samourai anatina toe-javatra hafahafa, matetika mampihomehy.
Toa voafehiny tsara ireo teknika nentim-paharazana mba hamerenana mandika amin'ny antsipirihany ny akanjo fiadiana izay tsy ho afaka ny tsy hahazo toerana any amin'ny tranombakoka mihitsy.
Manoratra ho an'ny gazetiboky an'aterineto artscape Japan, izay mandrakotra ny sehatry ny kanton'i Japana, nantsoin'i Alan Gleason hoe ”fisianabo samourai” (samurai surrealism) ilay fomba. Manazava izy:
Isaky ny taona vitsivitsy, mahazo fitomboka avy amina sarina geishas mikarepoka hamburger, sy ny toy izany, vita tamin'ny fomban'i ukiyoe na i Nihonga ny artista iray. Na dia mahafinaritra aza ilay haingo kely amin'ny voalohany, tonga amin'izay noeritreretina ihany izy afaka fotoana vitsy — tsara ho an'ny fihomehezana in-dray na in-droa, fa tsy ny fanehoankevitra mandidy amin'ny fampitahàna izay ”nentim-paharazana amin'ny maoderina” izay mahazatra lazain'ilay mpahaikanto fa izany no izy.
Ataon'ireo tena matihanina amin'ity karazana ity (tonga ao an-saina i Masami Teraoka) izay hampandeha izany, tsy noho ny fanarabiana miharihary, fa noho ny fifehezany ny endrika kanto klasika ampiasaina mba hametrahana ilay fakàntahaka maneso . Ary indraindray, tena tsara loatra ny fomban'ilay artista ka manondrotra ilay kanto hivoaka ny sehatry ny fakantahana maneso mihitsy izy, na mampihomehy toy inona aza ny votoatin'ilay lohahevitra.
Tena modely lafatra amin'izany ny asan'i Tetsuya Noguchi.
Ahitana sary sokitra ohatry ny tena izy, ana samourai manao aronakanjo mitovy amin'ny ‘ coccinelle ‘ ny kanto hafa vokarin'ilay mpahaikanto monina ao Tokyo:
— Shift Mag Japan (@shift_en) January 21, 2017 ZZZZZ
[MISEHO] Ny “ANTIQUE HUMAN” an'i Tetsuya Noguchi https://t.co/R1XRwSCohA Ny toerana misy ireo SAMOURAI. Ntaolo fa tontolo vaovao. pic.twitter.com/XVcrOVKJl1
Ankoatra ny fisehoany matetika ao amin'ny Twitter, aseho tsy tapaka ao Japana ny asan'i Noguchi. Aseho amin'izao fotoana izao ao amin'ny Vadintranom-bakoka Pola ao Ginza, Tokyo ny fampirantiany ‘Avy amin'ny Am-pitiavana Avy Any Amin'ny Taonjato Salantsalany‘.
Sary sokitra mampihomehy ana mpiady: Arantin'i Tetsuya Noguchi manomboka .rahampitso ( ny 13 Jolay 2013) ao Giza ireo sary sokitrany lehibe indrindra ao Ginza.
Milazalaza ny dingana famoronany ity fanadihadiana fohy tamin'ny 2017 ity (amin'ny teny Japoney, miaraka amin'ny dikan-teny Youtube amin'ny teny anglisy):